विविध – KhabarChakra
महिलामा हुने २ स्तनको आकार फरक फरक हुन्छ किन ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी-स्तनको स्वरुप सामान्यता सबै महिलाहरुमा उस्ताउस्तै भएपनि यसको आकार महिलैपिच्छे फरक मात्र होइन स्तनपिच्छे फरक हुन्छ ।महिलाहरको यौन अंग विकसित भएपछि महिला सेपक्स हर्मन (इस्ट्रोजिन)ले महिलाको प्रारम्भिक स्तन विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । बिस्तारै स्तनको मुन्टामा हल्का बृद्धि हुन्छ । तर, दुबै स्तनले एउटै खालको हर्मन नपाउन पनि सक्छन् । जसका कारण एउटा स्तन अर्को भन्दा तुलनात्मक रुपमा ठूलो हुन्छ ।[Read More…]
by KhabarC —	May 20, 2019 —	0 comments —	विविध
गोत्रको सुरुवात कसरी भयो? कुन थरको गोत्र कुन ?
नेपाली तथा भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता ( ई.पू.) विश्वको प्राचीन सिंधु- घाटी नदी सभ्यताहरू मध्येको एक प्रमुख सभ्यता थियो । यो हडप्पा सभ्यता र सिंधु-सरस्वती सभ्यताका नामले पनि जानिन्छ, हिन्दूका विभिन्न थरहरू हुन्छन् । ती थरहरू पनि विभिन्न गोत्रमा बाँडिएका छन् । उनीहरू आफू विभिन्न ऋषिमुनिका सन्तान भएको विश्वास गर्दछन् । त्यसैले उनीहरूका गोत्र पनि प्राचीन ऋषिमुनीहरूकै नाममा आधारित देखिन्छन्[Read More…]
by KhabarC —	May 17, 2019 —	0 comments —	विविध
राजी समुदायमा उमेर नपुग्दै विवाह
– दुर्गा देवकोटा लम्की, २३ वैशाख । कैलालीमा वादी र राजी समुदायको बसोबास छ । अल्पसङ्ख्यक राजी र पिछडिएको वादी समुदायमा अधिकांशको बालविवाह हुन्छ । टीकापुर नगरपालिकाको ज्योतिनगरमा राजी र वादीको बस्ती छ । त्यहाँ बस्ने धेरै किशोरीको उमेर नपुगेरै विवाह हुन्छ । विवाहको अन्तर हेर्दा त्यहाँ हिजोको चलन र आजको चलनमा केही फरक छैन । त्यहाँ १६ वर्षदेखिका किशोरी[Read More…]
एजेन्सी । कतिपय कुराहरू सुन्दै अनौठो लाग्छ । आ–आफ्नो ठाउको परम्परा अनुसार समाजको नियममा बाँधिनु पर्ने हन्छ । यस्तै छ कम्बोडियाको सुन्दा आश्चर्य लाग्ने खालको परम्परा जहाँ छोरीलाई आफ्नो जिवन साथी रोज्न एक भन्दा बढी पुरुषसंगका यौन सम्बन्ध राख्न अभिभावकले नै उक्साउँछन् । छोरीहरुको सजिलोका लागि बुवाआमाले नै घरभन्दा केही टाढा प्रेम झुपडी बनाइदिन्छन् । यसमध्येको एउटा परम्परा कम्बोडियामा छ,[Read More…]
by KhabarC —	April 24, 2019 —	0 comments —	विविध